The AI Rush by Jean-Baptiste Dumont 3162181 views
AI and Machine Learning Demystified... by Carol Smith 4376221 views
10 facts about jobs in the future by Pew Research Cent... 1401368 views
Harry Surden - Artificial Intellige... by Harry Surden 1057506 views
Inside Google's Numbers in 2017 by Rand Fishkin 1619379 views
Pinot: Realtime Distributed OLAP da... by Kishore Gopalakri... 841731 views
Religion in Myanmar, Islam , Buddhism, Christian
1. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 1/15 စာသင်ကျောင်းနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများမှစာရိတ္တမြှင့်တင်ရန် စစ်နှင့်ငြိမ်းချ မ်းရေး မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာအလွန်ထွန်းကားသော နိုင်ငံဖြစ်သည် ။ အင်္ဂလိပ် ခရစ်ယာန်များက ကိုလိုနီအဖြစ် အနှစ်၁၀၀ကျော် အုပ်ချုပ်ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၉၀% ရှိနေဆဲဖြစ်သည် ။ အသက် ကြီးလာပါက လူတိုင်း ဘုရားတည် ပြီးကိုးကွယ် သည့် စရိုက် ကြောင့် ဘုရားပုထိုးများ လွန်စွာများပြားလှပါသည် ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စေတီ၊ ရုပ်ပွားတော် အများဆုံး နိုင်ငံကြီး ဖြစ်ပါသည် ။ နောင် အနာဂါတ် မြန်မာ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မျိုးစောင့်လုပ်ရပ်များတွင် မည် ကဲ့ သို့ ဥပဒေပြဌာန်း၊ ကျ င့်သုံးကြမည် ကိုမသိနိုင်ပါ။ ဥာဏ် လည်းမမှီပါ။ သာသနာစောင့်ထိန်းရန် သံဃာတော် များက လုပ်ဆောင်ကြပါလိမ့်မည် ။ သံဃာတော် မည် မျှ မြန်မာပြည် တွင် ရှိသနည်းဟုမသိနိုင်ပါ။ ၂၀၁၄ တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း များစွာရှိသော မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း ဘုရား၊ပုထိုးများထံ ဘုရားဖူး လိုက် သွားစဉ် အလွန်များပြားလှသော သံဃာတော် များ၊ သီလရှင်များကိုတွေ့ရသည် ။ အထူးသဖြင့် ငယ် ရွယ် သူများစွာကိုတွေ့မြင်ရသည် ။ မန္တလေးမြို့ပေါ် စားသောက် ဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်များသို့ မနက် ပိုင်း ဆွမ်းခံ ကိုယ် တော် များ၊ ဆရာလေးများစွာကိုအဆက် မပျက် ရှိနေသည် ကိုတွေ့ရသည် ။ တရားမဝင် ထုတ် ပြန်ချက် အရာ မြန်မာပြည် တွင် စစ်သား ၄သိန်း ရှိသလို၊ ဗုဒ္ဓသံဃာ ၄သိန်း ရှိသည် ဟုဆိုကြသည် ။ အလွန်ကြီးမားလှသော သံဃာထုအင်အားဖြစ်သည် ။ ပြည် သူလူထုကလည်းသံဃာများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားပုထိုးများအတွက် အလှုဒါန်း ရက် ရောကြသည် ။ ပေးကမ်းကြသည် ။ ထိုအခါ အလုပ်ကိုင်နှင့်စာသောက် ဖို့ ခက် ခဲသောကာလ ဖြစ်၍၊ ပြည် သူလူထုက ကျွေးမွေးသော သံဃာထုနှင့် အစိုးရက ကျွေးမွေးသော စစ်သားထုအလွန်များပြားစွာရှိနေသည် ဟုသာ ဆိုရပါမည် ။ အမှန်တော့ သံဃာ ထိုမျှများပြားနေခြင်း မဖြစ်သင့်ပါ။ တိုင်းပြည် တိုးတက် ပြီး၊ အလုပ်ကိုင်ပေါများလာပါက လူငယ် များ ဘုန်းကြီးစာကျောင်းများနှင့် စစ်တပ်များမှထွက် ပြီအလုပ်ခွင် ဝင်ကြမည် ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံတိုးတက် ရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ကြမည် ဖြစ်သည် ။ အစ္စလမ်ဆန့်ကျ င်ရေးများ မြန်မာနိုင်ငံမှရခိုင်ပြည် အရေးအခင်း အပြီးတွင် မြန်မာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာများ အကြား၊ မျိုးစောင့်ဝါဒ အရှိန်ဟုန်ကြီးစွာ ဝင်လာသည် ။ မြို့ရွာများစွာမှမြန်မာ၊အစ္စလမ်များ ဒုက္ခရောက် ခဲ့ရသည် ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကပဲ ပြန်လည် ကယ် တင်၊ စောင့်ရှောက် ထားရသည် ။ မူဆင်လင် ပြဿနာမှာ ကမ္ဘာ့ အရေးဖြစ်သည် ။ မြန်မာပြည် ရှိဗုဒ္ဓဘာသာ လူတန်းစားအားလုံးနီးပါး၊ တတ် သိပညာရှင် မိတ် ဆွေအချို့ပင်လျှ င် အမျိုးထိတော့ နာကြပါသည် ။ လင်မယား စကားများလျှ င် ယောင်္ကျားက မိန်းမဆွေမျိုးများနာမည် လုံးဝမပြောမိအောင် အချေတင်ပြောရပါသည် ။ အမျိုးထိလာပါက မယားဖြစ်သူသည် လုံးဝမခံ၊ မိန်းမနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြန်လည် တိုက် ခိုက် လာမည် ဖြစ်သည် ။ အလားတူအစ္စလမ်းများကိုအခဲမကျေ ၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့်သာမက၊ အမျိုးဆက် မပွားရန် လုပ်ရမည် ဟုအကြမ်းနည်းများကိုလည်းစဉ်းစားကြပါသည် ။ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ နိုင်ငံသည် အစ္စလမ် ၁၀၀% ဖြစ်ပြီး၊ လူဦးရေ သန်း၁၃၀ မြန်မာပြည် ထက် ၂ဆကျော် များပြားပြီး၊ ရှမ်းပြည် နယ် သာသာမျှ ရှိသည် ။ ထို့အပြင် လူကိုလူလိုမဆက် ဆံပဲ၊ အကျ င့်ပျက် နေပြီး ဘင်္ဂလားမိန်းမ၊ကလေးများဘဝမှာ မြန်မာပြည် ထက် နှိမ့်ကျ ၊ ဆိုးဝါးကြောင်း မိတ် ဆွေတို့သိကြပါမည် ။ ထိုနိုင်ငံမှရေကြည် ရာ၊ မြက် နုရာ ရခိုင်ပြည် နယ် မှမြန်မာနိုင်ငံတွင်း
2. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 2/15 ရွှေ့ပြောင်းလာခြင်းကိုအကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်၊ မြန်မာစစ်အာဏာရှင် ဝါဒ ပြန်လည် အသက် ရှင်လာမည် ဖြစ်သည် ။ နောင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက် ကြီးပွားလာပါက ဘင်္ဂလားဒေ့လူမျိုးများ တရားမဝင် ဝင်လာမည် ဖြစ်သည် ။ ယခုမြန်မာများ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင် လူ၅သန်းကျော် ၊ အလုပ်လုပ်နေသည် ခြင်း၊ မြန်မာတစ်သန်းကျော် မလေးရှားတွင် တရားမဝင် အလုပ်လုပ်နေခြင်း တို့ကို ထိုင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံများက မည် ကဲ့ သို့ ဖြေရှင်းသနည်းဆိုသည် ကိုလေ့ လာ၊ သင်ယူ၊ အတုယူရမည် ဖြစ်သည် ။ ဘင်္ဂလာဒေ့ (ရိုဟင်ဂျာများ) ကိုအကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းခြင်းများကိုနောက် နောင် မလုပ်ဖြစ်ရန်၊ ဒုက္ခသည် စခန်းဖွင့်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းသည် ကောင်းပေသည် ။ နောက် ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံ အတူတကွ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှလွတ် ရန် ယိုင်းပင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါသည် ။ လောလောဆယ် တော့ ကိုယ့် နိုင်ငံပဲ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှလွတ် အောင် လုပ်နေဆဲဖြစ်သည် ။ အကြမ်းဖက် တော် လှန်ရေးသမားများစွာ အစ္စလမ်နိုင်ငံများတွင် ရှိနေသည် မှာ ငြင်းမရပါ။ လူ့အခွင့်အရေး အားပေးသော၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် 9/11 အရေးခင်းကြီး၊ ကမ္ဘာတုန်အောင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည် ။ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့များကိုကာကွယ် ရန်၊ နည်းမျိုးစုံ သုံးစွဲသည့် အထဲတွင် တန်ပြန်၊ အကြမ်းဖက် ခြင်းသည် နည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည် ။ သမ္မတ အိုဘားမား လက် ထက် တွင် 9/11 အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင် ပုန်းအောင်းနေသည့် ပါကစ္စတန်တွင် အမေရိကန် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့က ဝင်စီးနင်းပြီး သတ် ဖြတ် နိုင်ခဲ့သည် ။ ယခင်သမ္မတ ဂျော့ ဘွတ် အမေရိကန်တပ်များ က အကြမ်းဖက် အားပေးဟု၊ စွတ် စွဲပြီး၊ အီရက် နိုင်ငံကို တိုက် ခိုက် သိမ်းပိုက် သည် ။ အီရက် သမ္မတ ဆဒမ်ဟူစိန်ကိုဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲ၊ သေဒဏ် ချမှတ် ခဲ့သည် ။ မည် သို့ဖြစ်စေ အစ္စလမ်အကြမ်းဖက် သမားများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေချင်သော အစ္စလမ် လူထုကြီးကိုဆက် လက် လွှမ်းမိုးနေဦးမည် ဖြစ်သည် ။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၇၀၀ လောက် ကတည်းက အစ္စလမ်ဝါဒီများက မက္ကာမြို့ကိုသိမ်ပိုက် ပြီး၊ နောက် ပိုင်း အစ္စလမ် အင်ပါယာကြီးသည် ဥရောပတိုက် ကိုပင် လွမ်းမိုး၊ အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သည် ။ နောက် တစ်ဖန် တူရကီအော် တိုမန်အင်ပါယာကြီး ထပ်ပေါ်လာပြီး ဥရောပတိုက် ကို လွမ်းမိုးပြန်သည် ။ အလယ် ခေတ် က၊ ခရစ်ယာန်၊ မွတ် ဆလင် ခရူးဆိတ် ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးများမှလူသန်းပေါင်းများစွာ သေကျေ ခဲ့သည် ။ ဥရောပနိုင်ငံများက အင်အားဖြင့် အရှေ့အလယ် ပိုင်း၊ ဂျေယုဆလင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက် သည် ။ ခံတပ်ကြီးများဆောက် လုပ် လွမ်းမိုးခဲ့သော် လည်းကြာကြာမခံ၊ မကြာမီတော် လှန်ခံရသည် ။ ပြန်ချီတက် တိုက် ခိုက် ရပြန်သည် ။ မဆုံးနိုင်သော ကရူးဆိတ် ဘာသာရေးစစ်ပွဲဖြစ်သည် ။ ယခုအခါ အစ္စလမ်နိုင်ငံများ စစ်အင်အားမကြီးသော် လဲ အစ္စလမ်ဘာသာသည် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများစွာကို ထိုးဖောက် ၊ သာသနာပြုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည် ။ ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာများလည်းအစ္စလမ်ကိုစိုးရိမ်သည် ။ အစ္စလမ်များ တိုးတက် သော နိုင်ငံကြီးများသို့ ဒုက္ခသည် များအဖြစ် ရောက် လာခဲ့သည် ။ ထောက် ပံ့ကြေးများကိုရယူပြီး၊ သားသမီးများကိုမိဘများက၊ ငယ် စဉ်ကတည်းက သွန်သင်သည် ။ ထောက် ပံ့ကြေးများကိုသုံးပြီး၊ ပညာသင်ပေးသည် ။ အနှစ်၂၀ ကြာသော ထိုအစ္စလမ်ဒုက္ခသည် များသည် ပညာတတ် များ၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သိပ္ပံပညာရှင် ... အထူးသဖြင့် ဥပဒေပညာရှင်များ ဖြစ်လာပြီး၊ တိုးတက် သော နိုင်ငံများ၏ ဥပဒေပြုမှုကို ဝင်ရောက် ပါဝင်မည် ။ လူမဲပင်ဖြစ်စေ ပညာထူးချွန်လာပါက အမေရိကန်နိုင်ငံတော် သမ္မတဖြစ်လာသည် ကိုသမ္မတအိုဘားမားက သက် သေပြခဲ့သည် ။ ဆင်းရဲသားဘာသာ ကဲ့ သို့ဖြစ်လာပြီး အစ္စလမ် ဆင်းရဲသူဥိးရေသည် များသထက် များပြားလာသည် ။ ဆင်းရဲသော် လည်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင် မိသားစုသည် စားဝတ် နေရေး ရောင့်ရဲတင်းတိမ်အောင် ဘာသာရေးကျ င့်စဉ်များက အထောက် ကူပြုပါသည် ။ အစ္စလမ်ဘာသာသည် ဆင်းရဲသားအများစုကိုးကွယ် သောဘာသာ ဖြစ်လာသောကြောင့် ဆင်းရဲသူများကို ထောက် ပံသည် ၊ ဗလီကြေး (ဇကာတ် - ဆင်းရဲသားကြေး) နှစ်စဉ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၂.၅% ဖြင့် အစ္စလမ်အချင်းချင်း လူမှု၊ ပညာ၊ စီးပွား၊ ထောက် ပံ့ပါသည် ။ တစ်နေ့ ၅ခါ မက္ကာမြို့ဖက် လှည့် ပြီး ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဒုက္ခဆင်းရဲများကိုကျော် လွှားနိုင်သည် ။ ရောင့်ရဲမှုကိုရရှိပြီး၊ စိတ် ဖိစီးမှုများမှလွတ် မြောက် ပါသည် ။ မယုံသောကြောင့် ကျွ န်ုပ်ကိုယ် တိုင်လည်းအစ္စလမ်များကဲ့ သို့ တစ်နေ့ ၅ကြိမ် တရားထိုင်ကြည့် ခဲ့သည် ။ ကျွ န်ုပ် စီးပွားရေးသည် ပိုမိုတိုးတက် လာပြီး၊ ကျွ န်ုပ်ကိုယ် တိုင်လဲ လောဘ နည်းပါးလာသည် ။ အပျော် အပါးများကိုလဲ ရှောင်ရှားနိုင်လာပါသည် ။ အစ္စလမ် မဏ္ဍိုင်ကြီး ငါးချ က် မှာ ၁။ အလ္လာအရှင်မြတ် မှတစ်ပါး ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ထိုက် သူမရှိ။ ၂။ တစ်နေ့လျှ င် ငါးကြိမ်ကျ မှန်မှန် ဝတ် ပြုရခြင်း။ ၃။ ဇကာတ် ဆင်းရဲသားကြေးပေးရခြင်း ၄။ ရန်မဇန်လ၌ ဥပုသ် သီလ ဆောက် တည် ရခြင်း။
3. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 3/15 ၅။ ငွေကြေးတတ် နိုင်သူများသည် မိမိတစ်သက် တာအတွင်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်ခန့် မက္ကာမြို့၊ ဟာဂ်ျအိမ်တော် သို့ ဘုရားဖူးသွားရခြင်း ..စသည် တို့ဖြစ်သည် ။ အထက် ပါ ပုံမှာ အမေရိကန်၊ နယူးယောက် မြို့လည် ခေါင် ရဲလုံခြုံရေးကပင် လူ့အခွင့်အရေးအရ၊ ခွင့်ပေးရသည့် ၊ အစ္စလမ်ဝတ် ပြုပွဲ ၂၀၁၁ ဓါတ် ပုံဖြစ်သည် ။ အမေရိကန်အစိုးရက မကြာခဏမဖြစ်စေရန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ညှိနှိင်းရသည် ။ 9/11 အကြမ်းဖက် တိုက် ခိုက် ခံရသည့် နေရာတွင် အစ္စလမ်အဖွဲ့တစ်ခုက ဗလီဆောက် ရန်၊ ခွင့်ပြုမိန့် ရလုဆဲဟုသတင်းထွက် လာသည် ။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အာဏာကြီး(၃)ရပ်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ ကြီးစိုးလာပါက အမေရိကန်အစိုးရသည် အစ္စလမ်များကို သနားကြင်နာစွာ၊ ဆက် ဆံလာမည် ဖြစ်သည် ။ ယခုသမ္မတအိုဘားမား၏ ဖခင်သည် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်သည် ။ သို့သော် သမ္မတအိုဘားမား ဖခင် အစ္စလမ်နှင့် အတူမနေပဲ၊ ခရစ်ယာန် မိခင်အသိုင်းဝိုင်းတွင် နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သဖြင့် ခရစ်ယာန်ဝါဒီဖြစ်သည် ။ အိုဘားမား၏ ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီဝင်များမှာ လူ့အခွင့်အရေးကိုဦးစားပေးသော လစ်ဘရယ် ခရစ်ယာန် အများစုဖြစ်သည် ။ အတိုက် ခံ ရီဗာဘလက် ကင် ပါတီဝင် အများစုမှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်များ ဖြစ်ပြီး၊ မွတ် ဆလင်များအပေါ် သဘောထားတင်းမာသည် ။ ယခုအချိန်ထိ အမေရိကား ကွန်ကရက် ၊ ဆီးနိတ် များတွင် အစ္စလမ်များ မဝင်လာနိုင်သေးသော် လည်း။ ဆင်းရဲသား၊ လူမဲများစွာမှာ အစ္စလမ် ဘာသာသို့ ကူပြောင်းနေကြသည် ။ အကြီးကျ ယ် ဆုံး လူမဲ ကမ္ဘာဟဲဗီးဝိတ် လက် ဝှေ့ချန်ပီယန် မိုဟာမက် အလီဆိုသူသည် ၊ ခရစ်ယာန်ဝါဒမှ အစ္စလမ်ဝါဒသို့ ကူးပြောင်းသူဖြစ်သည် ။ သိပ်ဖိနှိပ်လွန်းလျှ င် ဘာမှမတတ် နိုင်ပါက ဆင်းရဲသား၊ လူထုအများစုကိုးကွယ် သည့် အစ္စလမ်ဝါဒသို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့် အာဏာဖီဆန်ပြရသည် ။ ဘာသာတစ်ခုကိမတရားဖိနှိပ်လွန်းပါက ပျောက် ကွယ် မသွားပဲ၊ မြေအောက် ဝင်သွားပြီး တဖြေးဖြေး ပိုမိုကြီးထွားလာလေ့ ရှိသည် ။ လူသားအားလုံး ဂျီနိုးဆိုက် သတ် ဖြတ် ခြင်းဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နာဇီဟစ်တလာက အစ္စရေးများ ၆သန်းကျော် သတ် ဖြတ် ခဲ့ပါသည် ။ ကမ္ဘာက စာနာသနားရသည် ။ ရလဒ်အဖြစ် အနှစ်၂၀၀၀ နိုင်ငံမဲ့ အစ္စရေးလူမျိုးများကိုအင်္ဂလိပ်က အစ္စရေးနိုင်ငံ ထူးထောင်ပေးသသည် ။ ဖိနှိပ်ခံ အစ္စရေးလူတန်းစား ပြန်လည် ဝံ့ကြွားပြီး၊ စစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့ သည် ။ အလားတူခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကို နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ကျော် သတ် ဖြတ် ၊ ညှင်းဆဲ၊ နှိပ်ကွပ်ခဲ့သော ရောမအင်ပါယာကြီးတွင် ဖိလေ၊ ကြွလေ ဆိုသည့် အတိုင်း ခရစ်ယာန်များ မြေအောက် ၊ ဝတ် ပြုကိုးကွယ် ခြင်းများဖြင့် ဆင်းရဲသား၊ ပြည် သူလူထုအတွင် စိမ့်ဝင်၊ ကြီးထွားလာခဲ့သည် ။ ရောမဧကရာဇ် ကွန်စတင်တန် Constantine the Great (c. 272 – 337) သည် ပထမဆုံး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဖြစ်လာပြီး၊ ခရစ်ယာန်များကိုသတ် ဖြတ် ၊ နှိပ်ကွပ်ခြင်းများ အဆုံးသပ်ခဲ့သည် ။ သို့သော် ငွေနှင့်အာဏာရှိခရစ်ယာန်လူတန်းစားနှင့် ခရစ်ယာန်ဆင်းရဲသားလူထု ကိုယ် စားလှယ် များ ဘာသာရေးအင်အားပြိုင်ဆိုင်၊ တိုက် ခိုက် မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် ။ အကြီးမားဆုံးမှာ မာတင်လူသာ Martin Luther (1483 -1546) ခရစ်ယန်သာသနာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည် ။ အစ္စလမ်ဝါဒီနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒီများတွင်လည်းကွဲပြားသော အယူဝါဒမျိုးစုံ ရှိပါသည် ။ ဖိနှိပ်ခံရပါက ဖိနှိပ်မှုများမှလွတ် မြောက် အောင် ကြိုးစားလာရသည် မှာ လူ့သဘာဝပင်ဖြစ်သည် ။ စိတ် ဖြေသိမ့်ဖို့ဘုရားတရားနဲ့နေ
4. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 4/15 ငယ် ရွယ် သူများသည် မျှော် လင့်ချက် ကြီးနှင့် အလုပ်များနေပြီး၊ များသောအားဖြင့် ရွတ် ဖတ် ၊ လှောင်ပိတ် ခံရသည့် တရားပွဲ၊ ဘုရားရှိခိုးပွဲများကိုရှောင်ရှားလေ့ ရှိသည် ။ တနာရီထိုင်နေရမှာကိုသူတို့လွတ် လပ်ခွင့် ချည် နှောင်ခံရသလိုယူဆကြသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမဲ့၊ ညအိပ်ချိန်၊ မနက် လင်းချိန် တရားခွေ၊ တရားပွဲများ အော် လံသုံးပြီး၊ ရပ်ရွာထဲတွင် ကျ ယ် လောင်စွာ ဖွင့်နေခြင်းကိုလူငယ် များ မကြိုက် ကြ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာ (သို့မဟုတ် ) မိရိုးဖလာ သံယောဇဉ်ရှိသော် လည်းလူကြီးများ၏ အားနည်းချက် များကို တော် လှန်ပုန်ကန်စိတ် ဖြင့် ဘာသာရေး အခမ်းနားနှင့် ဝေးအောင် နေကြသည် ။ အချို့ ပြင်းထန်သူများက မိမိကိုယ် ကိုယ် ဘာသာမဲ့ ဟုပင် ခံယူသည် ။ လွတ် လပ်ရေးရပြီးနောက် လူငယ် များစွာ ဘာသာမဲ့ ကွန်မြူနစ်ဖြစ်သွားပြီး မိဘ-သားသမီး ပဋိပက္ခဖြစ်ရသည် ။ ယခုခေတ် တွင်လဲ မထူးပါ။ ငယ် ရွယ် သူများအဖို့ ကိုယ် စိတ် ၊ ကျ န်းမာရေးအလွန်ကောင်းနေစဉ် ဝိညာဉ်ရေး Spiritual (ဘာသာရေး) မလိုအပ်ပါ။ အရေးထဲ ဘာသာတရာ ကိုင်းရှိုင်းလှသည့် လူကြီးများက ကိုယ် ကျ င့်တရားပျက် နေသည် ကိုတွေ့ရချိန်တွင် လူငယ် များက ဘာသာတရား အလကားပါပဲဟုဆိုကြသည် ။ လူငယ် ၊ လူကြီးများ ငွေကြေးဆင်းရဲ၊ အလုပ်မရှိ၊ စိတ် သောက၊ ရောဂါဘယများ၊ မကျ န်းမာမှု၊ လူမှုရေးပြသနာများ ဖြင့် ကြုံနေရသူများ ရှိသည် ။ အရှက် ကွဲမည့် ပြသနာများ၊ အာဏာပြုတ် မည့် အရေး၊ အလုပ်ပြုတ် မည့် စိုးရိမ်မှု၊ ယနေ့ စားစရာပင်မရှိသည့် ဆင်းရဲသားများ စသည် ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကြုံတွေနေသူမြောက် များစွာ ရှိပါသည် ။ ထိုသူများသည် ကိုယ် စိတ် အားနည်းသောအခါ ဝိညာဉ်ရေး (ဘာသာရေး) ဖြင့် စိတ် ဖြေသိမ့်၊ အားမွေးကြရသည် ။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓအသိုင်းဝိုင်းတွင် အပယ် ခံ ဖြစ်လာသောအခါ၊ အစ္စလမ် (သို့မဟုတ် ) ခရစ်ယာန် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် တွေ့သွားပြီး၊ သူတို့ကူညီစောင်မမှုဖြင့် ဘဝဒဏ် ကိုခံနိုင်လာသည် ။ အထူးသဖြင့် ခိုကိုးရာမဲ့ မိန်းကလေးငယ် များသည် မြန်မာစကားပုံ၊ မိန်းကလေးများဆင်းရဲဒဏ် ကိုမခံနိုင် .. ဆိုသည့် အတိုင်း ဆင်းရဲလျှ င် မိမိခန္တာကိုယ် ကို ရောင်းပြီး မိသားစုအား ထောက် ပံ့ရန် ဝန်မလေးတော့ ပါ။ များစွာသော လူငယ် များ မူရစ်၊ပျက် စီးလောက အသိုင်းအဝိုင်းကို ရောက် သွားသည် ။ အစ္စလမ်တစ်ဦးနှင့် လက် ထပ်ဖို့လဲ ဝန်မလေးတော့ ပါ။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ပြီး သူတို့၏ မဏ္ဍိုင်ကြီး ငါးချက် မှ နံပါတ် (၁)၊ (၂) နှစ်ချက် ကိုသာ လိုက် နာလျှ င် မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောင်္ကျားဖြစ်စေ ဝန်တော် တော် ပေါ့သွားသည် သည် ။ စိတ် ပညာရှင်များကလည်းလက် ခံသည် ။ နောက် တစ်ချက် မှာ သူတို့ဆင်းရဲပင်ပမ်းများကိုဗလီဆရာများထံ ပြောပြခြင်းဖြင့် စိတ် ပြေ၊ စိတ် ပေါ့သွားသည် ။ ဗလီမှအစ္စလမ်ကူညီတတ် သူများက အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးအခွင့်လမ်းများဖြင့် ကူညီပေးသည် ။ ပိုက် ဆံပေးခြင်းသည် ဖျက် ဆီးရာရောက် သည် ဟုအစ္စလမ်၊ ဗလီဆရာ၊ စကောလားများက ခံယူသည် ။ အစ္စလမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများကမူအစ္စလမ်ဘာသာဝင် အချင်းချင်းကိုသာ အများအားဖြင့် ကူညီကြသည် ။ ထိုသို့ ဥပဒေ၊ ကျ င့်ထုံး ဆင်းရဲသားကြေး သတ် မှတ် သည် ။ ကိုယ့် အမျိုး၊ မိတ် ဆွေ၊ ကိုယ့် ဘာသာဝင်များကိုပဲ ကူညီသည် မှာ Nepotism ဟုခေါ်ပါသည် ။ လူတိုင်းတွင် ငါဝါဒသည် မွေးရာပါ ဗီဇဖြစ်ပါသည် ။ ခရစ်ယာန် ဘာသာ၏ အားသာချက် မှာ၊ တိုးတက် ချမ်းသာသော အနောက် နိုင်ငံများကြောင့် မဟုတ် ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ငွေ၊ အာဏာကိုစွန့်လွှတ် ရုံသာမက အသက် ကိုပင်စွန့်လွှတ် ပြီး၊ နောင်တမလွန်ဘဝတွင် ကောင်းကင်ဘုံသို့ အသက် ရှင်ဦးမည် ဟူသော ရိုးစင်းသည့် ကောင်းကင်ဘုံဝါဒဖြစ်သည် ။ ထိုဝါဒအပြင် ၁၆၀၀ ခနှစ်နောက် ပိုင်း ပရိုတက် စတင့်ခရစ်ယာန်အဖွဲ့စည်းများး ပေါ်ထွက် လာပြီး၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ကျ မ်းစာကိုလူတိုင်းကိုင်တွယ် နိုင်ခြင်း၊ လူတိုင်း ဘုန်းကြီးမှတဆင့်မဟုတ် ပဲ တိုက် ရိုက် ဆုတောင်း၊ အပြစ်လွှတ် ခံရနိုင်ခြင်း စသည် တို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြစ်သည် ။ သီချင်း Music သည် လူသားအားလုံးအတွက် စိတ် ဖြေသိမ့်စရာ ဖြစ်သည် ။ လူငယ် များက ပိုပြီး သီချင်းခုံမင်ကြသည် ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင် သီချင်းဖြင့် စတင်ဆွဲဆောင်ပါသည် ။ စင်ပေါ်တက် ပြီး၊ ဆိုတီးကခုန်လိုသူများ ခရစ်ယာန်တီးဝိုင်းများတွင် ဝင်ရောက် ဆင်နွဲခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုစိတ် ဝင်စားလာကြသည် ။ ခြုံကြည့် လိုက် လျှ င် အတင်းအကြပ်၊ ဘာသာ သွတ် သွင်းခြင်းဖြင့် အမည် ခံ၊ ဘာသာဝင်များ ရရှိပါသည် ။ အချို့သည် တကယ့် အနှစ်သာရရှိသော ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည် ။ ထိုသူများကြောင့် သာသနာပြုလုပ်ငန်း အောင်မြင်ရသည် ။ ဥပမာ ခရစ်ယန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်ထောင်ပြုပါက ဘယ် သူက မေတ္တာကြီးမားသနည်းအပေါ်မူတည် ပြီး၊ သားသမီးများကိုကြည့် နိုင်သည် ။ ဘာသာမတူလင်မယား၏ သားသမီးများက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေလျှ င် ထိုအိမ်ထောင်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှလုံးသား ပိုမိုကြီးမြတ် သည် ဟု ယေဘူယအားဖြင့် သတ် မှတ် နိုင်သည် ။ ချွင်းချက် များ ရှိပါသည် ။ အချို့ သေသည့် တိုင် ဘာသာမတူလဲ လင်မယား၊ မိမိကိုးကွယ် ရာ ဘာသာကိုလွတ် လပ်စွာ ကိုးကွယ် သွားကြသည် ။ ပတ် ဝန်းကျ င် လွမ်းမိုးမှုမှာလည်းအလွန်အရေးကြီးသည် ။ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များနှင့် ပိုပြီးနီးစပ်ပါက အစ္စလမ်ဘာသာသို့ ပြောင်းသွားလေ့ ရှိသည် ။ ထိုကဲ့ သို့ ဘာသာပြောင်းသွားခြင်းကိုလူ့အသိုင်းဝိုင်းက လက် ခံသော် လည်းမိရိုးဖလာသမားများက ရန်သူသဖွယ် ဆက် ဆံကြသဖြင့်၊ ဘာသာပြောင်းသူများ ဝေးရာသို့ ထွက် ပြေးကြရသည် ။
5. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 5/15 ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အစ္စလမ် ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းကိုမြန်မာပြည် သားတိုင်း သိသင့်သည် ။ သိဒ္ဓတ္တဂေါတမ (BC 563-483) လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၅၀ဝ အိန္နိယပြည် ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် ဘုရားပွင်တော် မူခဲ့ပြီး၊ အိမ်ရှေ့စံမှာ ဘုရင်ဖြစ်လာကာ၊ သက် တော် ၂၉နှစ်တွင် တောထွက် တော် မူသည် ။ ၆နှစ်အကြာ သဗ္ဗညုတဥာဏ် တော် ရရှိပြီး၊ တရားတို့ကို လှည့် လည် ဟောကြားက သက် တာ် ၈၀ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု (သေဆုံး) ခဲ့သည် ။ ဘီစီ၃၀၀ခန့်တွင် အိန္နိယ အသောကမင်းကြီးလက် ထက် တွင် ဘာသာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာသည် ။ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ထွန်းကားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂံခေတ် ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည် ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားချက် များ ပဋကတ် သုံးပုံ(သု၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ္မ) တို့ကိုစုစည်းမှတ် တမ်းတင်ခြင်းကို သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း ဟုခေါ်သည် ။ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး တစ်လအကြာ ပထမအကြိမ် BC 543 သင်္ဂါယနာတင်သည် ။ BC 443 တွင် ဒုတိယအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်သည် ။ BC 249 တွင် အသောကမင်းကြီးမှတတိယအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်သည် ။ BC 94တွင် သီရိလင်္ကာ (သီဟိုကျွ န်း) တွင် စတ္တုထအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်သည် ။ AD 1871 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးမြို့တွင် မင်းတုန်းမင်း ပဉ္စမအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်သည် ။ AD 1954 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဆဌမသင်္ဂါယနာတင်သည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်းထေရဝါဒ (မူလ) နှင့် မဟာယာန (မူကွဲ) တို့ ရှိသည် ။ ယခင် အသောကမင်းကြီး လက် ထက် အိန္နိယတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ လွှမ်းမိုးပြီး နောက် ပိုင်း မူလ ဟိန္ဒူများ ပြန်လည် လွှမ်းမိုးသွားခဲ့သည် ။ သို့သော် အနောက် အာရှ၊ အာဖဂန်နစ္စတန် အထိ၊ အရှေ့ဖက် တွင် မလေး၊ အင်ဒိုနီးရှား ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားခဲ့သော် လည်းနောက် ပိုင်း အစ္စလမ်ဝါဒီများ လွှမ်းမိုးသွားသည် ။ နိုင်ငံများစွာတွင် အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့ဥရောပ၊ အနောက် အာရှ၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကအထိနိုင်ငံများစွာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်လာသည် ။ ယခုအခါ ခရစ်ယာန်ဝါဒီများသည် ကမ္ဘာလူဦးရေ၏ ၃၃% ဖြင့် အများဆုံးဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်သည် ။ အစ္စလမ်ဘာသာလဲ အာရှနှင့်အာဖရိကသို့ ရောက် ရှိပြီး ပို၌လျှ င်မြန်စွာ ၂၂.၇% သို့ တိုးတက် နေပါသည် ။ ဟင်ဒီဘာသာမှအိန္နိယ မိရိုဖလာများသာ ၁၃% ကိုးကွယ် ကြပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တတ် သိ၊ ပညာရှင်များက နှစ်ခြိုက် သဖြင့် တိုးတက် သော နိုင်ငံကြီးများ (အနောက် နိုင်ငံ)များတွင် ဆက် လက် ပြန့်ပွားနေသည် ။ သို့သော် သာသနာပြုနည်းလမ်းတွင် ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလမ်များ နည်းလမ်းကိုမမီသောကြောင့် ရာနှုန်းအားဖြင့် ၆.၈% သာရှိပါသည် ။ အမှန်ကိုပြောရမည် ဆိုလျှ င် ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ပညာတတ် ၊ ဘုန်းကြီးများ ဆင်းရဲသား၊ ဘာသာခြားများ နေရာသို့ သွားရောက် သာသနာပြု၊ နေထိုင်ဖို့ ခဲယင်းလှသည် ။ ကပ္ပိယ မရှိလျှ င် ဘုန်းကြီးကျောင်းထိုင်ဖို့ ခက် ခဲလှသော ထေရဝါဒ ဝိနည်းများ ရှိသည် ။ တရုပ်၊ဂျပန်၊ အမေရိကား၊ ဥရောပ ရှိမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော် ကြီးများအတွက်
6. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 6/15 ဝိနည်းတင်းကျ ပ်မှုလျှော့ ရသဖြင့် မဟာယာန ဘုန်းကြီးများက သာသနာပိုပြီး ပြုနိုင်သည် ။ ဓမ္မကထိက ဆရာ၊ ဆရာမ အရေအတွက် နည်းပါးနေသည် ။ တရားပွဲများကိုလူငယ် များ စိတ် မဝင်စားခြင်း ..စသည့် အားနည်းချက် များ ရှိပါသည် ။ ဘာသာမဲ့ အုပ်စုမှာ ကွန်မြူနစ်များ၊ ဥရောပနိုင်ငံများဖြင့် အင်အားကြီးမားလာရာ ၁၁% အထိဖြစ်လာသည် ။ မြန်မာ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွင် ဒါရိုက် တာ ဦးသုခ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဦးကျော် သူ၊ တို့ စတင်ခဲ့သော နာရေးအသင်းကြီးမျာ ရန်ကုန်တွင် လူသိများသည် ။ ဦးကျော် သူပြောပြချက် အရ မန္တလေးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နာရေးအသင်းရှိပြီး၊ ရန်ကုန်တွင် ဆင်းရဲသာ အသုဘများအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ နာရေးအသင်းမရှိ၊ ဟုဆိုသည် ။ အစ္စလမ်၊ ခရစ်ယန်၊ ဟိန္ဒြူနာရေးအသင်းများသာ ရှိသောကြောင့်၊ ဦးသုခ၊ ဦးကျော် သူတို့ ဦးဆောင်ပြီး ယခုနာရေးအသင်းကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရသည် ဟုဆိုသည် ။ မိမိအမျိုးသားချင်ကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သော စစ်အာဏာရှင် စိတ် ဓါတ် များ မြန်မာပြည် သူလူထု၊ ရန်ကုန်မြို့သားများထိအောင် စိမ့်ဝင်နေသည် မှာ ထင်ရှားလှပါသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစစ်အမှန်ကို ပြန်လည် ပျိုးထောင်ဖို့ နမူနာများ ယူရမည် ဖြစ်သည် ။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားသော သီရိလင်္ကာ၊ မြန်မာ၊၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည် ။ ထိုင်းပြည် သူလူထုသည် ၉၈% ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေကြသည် ။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် လည်းအမေရိကန်စစ်စခန်းများဖြင့် ဗီယက် နမ်စစ် နှစ်ပေါင်း ၄၀ကျော် ခရစ်ယာန်များ လွမ်းမိုးမှုခဲ့ရသည် ။ သို့သော် ထိုင်းလူမျိုးများမှာ ခရစ်ယာန်ပြောင်းသွားသူနဲပါးသည် ။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုလျှ င် ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှမလေးစကားပြော၊ မလေးအနွယ် များသာ ရှိသည် ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလမ်း ဘုရားကျောင်း၊ဗလီများကိုတိုက် ခိုက် သည့် သတင်းများ ကြားရခဲ့သည် ။ သူတို့ မည် ကဲ့ သို့ ဗုဒ္ဓသာသနာကိုလက် တွေ့ထိမ်းသိမ်းနေသနည်းဆိုသည် ကိုလေ့ လာသင့်ပေသည် ။ နောက် ထပ် နိုင်ငံနှစ်ခုမှာ ဂျပန်နှင့်ကိုးရီးယား တို့ဖြစ်သည် ။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသည် အာရပ်၊ အစ္စလမ်နိုင်ငံများတွင် ရင်းနှီးမြှတ် နှံမှု သိပ်မရှိပါ။ အာရပ်၊အစ္စလမ်နိုင်ငံများ ဂျပန်ပြည် တွင် လုပ်ငန်းများ လာရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းလဲ မရှိသလောက် ဖြစ်သည် ။ မည် ကဲ့ သို့ ပေါ်လစီချထားသနည်းမသိရပါ။ ဂျပန်၊ကိုးရီးယာတွင် ခရစ်ယာန်များ ရှိသည် ။ သို့သော် မွတ် စလင်များ အလွန်နည်းပါးလှသည် ။ ဘာသာခြားများကိုဂျပန်လူမျိုးရေးဖြင့် ကာကွယ် ထားသည့် သဘောဖြစ်မည် ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ဒေသခံ မွတ် စလင်များမှာ ၆၃၅၅၂ ဦး၊ ဂျပန်တွင်နေထိုင်လျ က် ရှိသော နိုင်ငံခြားသား မွတ် စ်လင်မ်များမှာ ခုနှစ်သောင်းမှတစ်သိန်းအထိရှိမည် ဟုKeiko Sakurai က ခန့်မှန်းသုံးသပ်ထားသည် ။ူ၉၀ % မှာ နိုင်ငံခြားသား မွတ် စလင်များဖြစ်ပြီး ၁၀ % သာ ဂျပန်တိုင်းရင်း မွတ် စလင် များဖြစ်ကြသည် ဟု ဖော် ပြခဲ့သည် ။ လူဦးရေ သန်း ၁၂၀ ရှိသည့် ဂျပန်၌ မွတ် လင်မ်အသိုင်းအ၀ိုင်းသည် မဆိုစလောက် သော ပမာဏမျှသာ ဖြစ်နေ၏။ လူ့အခွင့်အရေးကိုအထူးဦးစားပေးသည့် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် ယခုအခါ ခရစ်ယာန်များ အမည် ခံအဆင့်တွင် ရှိနေပြီး၊ ဘုရားကျောင်းကြီးများမှာ အစိုးရယဉ်ကျေးမှုထိမ်းသိမ်းရေးမှစောင့်ရှောက် နေရသည့် ဘဝသို့ ရောက် နေပြီဖြစ်သည် ။ ပြည် သူလူထုသည် ဘာသာမဲ့များ အဖြစ်သို့ ရောက် ရှိလာသည် ။ မကြာမီထိုဒေသတွင် ခရစ်ယာန်များ ပျောက် ကွယ် သွားပြီး အစ္စလမ်နိုင်ငံများ၊ ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများ ဖြစ်လာနိုင်သည် ။ ကျွ န်ုပ်တို့ တစ်သက် တော့ အစ္စလမ်းနိုင်ငံမဖြစ်နိုင်သေးပါ။ နိုင်ငံတိုင်းတွင် လူတစ်စုကသာ နိုင်ငံတော် အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်ထားပါသည် ။ ထိုလူတစ်စုသည် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ တရားရေး၊ ဘာသာရေး စသည့် တောင်ကြီးခုနှစ်တောင်7Mountains ကိုကြီးစိုးလျှ င် အစိုးရအဖြစ် အရွေးခံရပါတော့ သည် ။ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းကိုကြည့် လျှ င် ပြည် သူကိုယ် စားပြုသော အစိုးရတက် လျှ င် တိုင်းပြည် စည် ပင်ဝပြောလေ့ ရှိသည် ။ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုပြည် သူလိုလားမှုဖြင့် တည် ထောင်ခဲ့သော် လည်းတကမ္ဘာလုံး ကွန်မြူနစ်ဖြစ်မသွားသောကြောင့် တော် လှန်ရေးကြီး ကျ ဆုံးသွားရသည် ။ လူထုကိုယ် စားပြု အစိုးရသည် ၈နှစ်မျှ အုပ်ချုပ်ပြီးလျှ င် အာဏာရှင် စတိုင်ဖြစ်သွားလေ့ ရှိသောကြောင့် အမေရိကန်တွင် သမ္မတ ၈နှစ်ထက် ပိုမလုပ်ရန် သတ် မှတ် ထားသည် ။ တရုပ်၊ အင်ဒိုနီးရှား များတွင် စနစ်သစ် ၅နှစ် သမ္မတ သက် တမ်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာအစိုးရကလည်းအတုယူ၊ ၅နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါသည် ။ လူတိုင်း သူဌေးဖြစ်လိုသည် ။ အချိုက လှုမှသူဌေးဖြစ်မည် ခံယူချက် ဖြင့် လှုကြသည် ။ သူဌေးများကပ်စေးနဲရာတွင် ခရစ်ယာန်သူဌေးသည် အဆိုးဆုံးဟုခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာ တစ်ဦးပြောဖူးသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာသူဌေးများသည် အလှုဒါန်းဆုံးဖြစ်သည် ။ သေပြီးနောက် ရှိသမျှအကုန် လှုပစ်သူများတွင် ခရစ်ယာန်သူဌေးများက ပိုများပါသည် ။ သူဌေးများအကြီးစားများမှာ နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်သူ၊ အစိုးရဖြစ်သည် ။ လက် နက် အင်အား၊ ငွေအင်အား ကြီးမားသူက အမေရိကန်သမ္မတသည် သြဇာအာဏာအရှိဆုံးလူဖြစ်မည် ။ လက် တွေ့တွင် ထိုသို့မဟုတ် ။ Michael H. Hart ၏ ကမ္ဘာ့ သြဇာအကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် များတွင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ထိပ်တန်းတွင် ရှိနေပါသည် ။ ထိပ်ဆုံးလူ၁၀၀ကိုဆန်းစစ်ကြည့် ရာ သူဌေးကြီး တစ်ယောက် မျှမပါဝင်။ ဘဝအောင်မြင်မှုသည် ငွေကြေးမဟုတ် ၊ ဘဝအောင်မြင်မှုသည် အာဏာ၊ဘာသာရေး၊တတ် သိပညာရှင်များ ဖြစ်နေပါသည် ။ ကွန်ဖြူးရှပ် အသက် ရှင်စဉ်က သူ့အတွေးခေါ်များ အကောင်ထည် ဖေါ်ရာတွင် မအောင်မြင်ခဲ့၊ သို့သော် သူကွယ် လွန်ပြီး ယခုတိုင်၊ တရုပ်၊ဗီယက် နမ်များတွင် လွမ်းမိုးပါသည် ။
7. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 7/15 မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် ထောင်ကျ လူသားများစွာ ကျွ န်ုပ် တွေ့ဆုံမေးမြန်း၊ နားထောင်ခဲ့ရာ လူကိုချုပ်နှောင်ခံရသော် လည်း၊ စိတ် ဝိညာဉ်လွတ် လပ်မှုရသည် ။ မိမိယုံကြည် ချက် တစ်ခုအလွန်ခိုင်မြဲနေသူသည် ထောင်ကျ ၊ ချုပ်နှောင်၊ ညှင်းဆဲခံရသော် လည်းမတုံမလှုပ် ခံနိုင်ကြသည် ကိုတွေ့ရပါသည် ။ ငွေ၊ အာဏာ၊ တဏှာ..အတွက် ကြိုးစားရင်း ထောင်ကျ သွားသူများအချို့မှာ ထောင်တွင်းစိတ် ဓါတ် ကျ ပြီး သတ် သေသူများရှိသည် ။ ဆင်းရဲသားများကိုဗဟိုပြုလျှ င် တမုဟုန်ခြင်း မဟုတ် သော် လည်း၊ တဖြေးဖြေး နိုင်ငံတော် အာဏာအထိလွမ်းမိုးနိုင်ပါသည် ။ တနည်းအားဖြင့် သမာသမတ် ရှိခြင်း၊ စာရိတ္တကောင်းခြင်း တို့ကိုဘာသာရေးသွန်သင်မှုဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သည် ။ ယခု၂၀၁၄ ထိုင်းနိုင်ငံအရေးတွင် ပြည် သူကိုယ် စားပြုသော အစိုးရသည် ၊ တောင်သူလယ် သမားများ၊ ဆင်းရဲသားများကိုကူညီ၊ထောက် ပံ့ရင်း နိုင်ငံတော် အာဏာ ရရှိလာသည့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက် ဆင် ထောက် ခံသူများဖြစ်သည် ။ ၅နှစ် ဝန်ကြီးချုပ် သက် ဆင် အစိုးရကို မူလအာဏာပိုင်အုပ်စုကြောင့် စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းလိုက် သည် ။ ယခုတိုင် လူများစုအကြိုက် သက် ဆင်၏ ညီမဖြစ်သူ ဝန်ကြီးချုပ်ယင်လတ် အစိုးရနှင့် အတိုက် အခံများ မဋိပက္ခ၂၀၁၄နှစ်ဦးအထိရှိနေဆဲဖြစ်သည် ။ အစ္စရေး သမိုင်းတွင်လည်းခရစ်ယာန်ကျ မ်းစာများက ဘုရား၏လူဆိုသူဒါဝိတ် မင်း King David သည် လည်းဆင်းရဲသား ၊ ပြည် သူလူထုကိုယ် စားပြုပြီး၊ နန်းတက် လာသည် ။ အကြီးကျ ယ် ဆုံး အစ္စရေးမင်းဆက် ကိုတည် ထောင်ခဲ့သည် ။ အိန္နိယမှအသောကမင်းကြီးလည်းဆင်းရဲသော ပြည် သူများကိုယ် စားပြု မင်းကောင်းမင်းမြတ် တစ်ဦးအဖြစ် တိုင်းပြည် စည် ပင်သာယာခဲ့သည် ။ မြန်မာ့ ရာဇဝင်တွင်လဲ အနော် ရထာ၊ အလောင်းဘုရား စသည့် ဆင်းရဲသော ပြည် သူလူထုကိုယ် စားပြု မင်းကောင်း၊ မင်းမြတ် များဖြင့် တိုင်းပြည် စည် ပင်သာယာ၊ ဝပြောခဲ့ပါသည် ။ အစ္စလမ်ဘာသာရေး၊ အကြောင်း ဆက် ပါမည် ။ အမြင့်မြတ် ဆုံးသော လူသားများသည် ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရှိသည် ။ သူတို့သည် ငွေ၊အာဏာနှင့် တဏှာ စွန့်လွှတ် နိုင်သူများဖြစ်သည် ။ ထိုသူများက ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် ရပ်တည် ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော ဘာသာရေးအဖွဲ့ စာရိတ္တ၊ ဝါဒ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်လာသည် ။ စာရိတ္တပညာကိုဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ် များက ဦးဆောင်ပြီး၊ လူမှုရေး၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ပါဝင်ရသည် ။ အထူးသဖြင့် ဘာသာဝင်များကိုလောကဓံ ခံနိုင်အား၊ ရောင့်ရဲကျေ နပ်ဖို့၊ မိမိဘဝတွင် သာယာခံစားနိုင်ဖို့ တရားဓမ္မအားဖြင့် ဆွဲဆောင်၊ နှစ်သိမ့်ပေးကြသည် ။ လူချမ်းသာများ၊ အာဏာရှိသူများသည် ငွေ၊အာဏာဖြင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုလွမ်းမိုးချင်သည် ။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည် တနည်းအားဖြင့် ဆင်းရဲသော၊ ပြည် သူလူထုကို ကိုယ် စားပြုသည် ။ ပြည် သူလူထုခံစားချက် များကိုနားလည် သည် ။ အစ္စလမ် ဘာသာဝင် ဆင်းရဲသားများမှာ အလွန်ရောင့်ရဲ တင်းတိန်နိုင်သူများဖြစ်သည် ။ အထက် ပါ ဖော် ပြထားသည့် မဏ္ဍိုင်(၅)ချက် တွင် ပထမ နှစ်ချက် ကိုဆင်းရဲသားများ လိုက် နာနိုင်ပါက ငွေ၊အာဏာ ဘာမှမရှိသော် လည်းဘဝဒဏ် ကိုခံနိုင်ပါသည် ။ မကောင်းမှုများကို မလုပ်ပဲ ဘဝဒဏ် ကိုကြံ့ ကြံ့ ခံနိုင်ရည် ကြီးလာပါသည် ။ ဘာသာရေးမရှိပါက လူသည် ခိုးဆိုး၊ လုယက် ဖို့၊ လစ်သလိုလိမ်လည် ၊ မတရားလုပ်စားဖို့ ဝန်မလေးကြပါ။ ဘာသာရေး ယုံကြည် ချက် မခိုင်မြဲသူများအတွက် အစိုးရဥပဒေက အုပ်ချုပ်ရသည် ။ ခိုးလျှ င် ခိုးမှု၊ မဒိမ်းကျ င့်လျှ င် ထောင်၂၀နှစ်နှင့်သေဒဏ် စသဖြင့် တရားဥပဒေများ ပြဌာန်းထားရသည် ။ အစ္စလမ် ထုံးတမ်း ဥပဒေများသည် တရားမျှတအောင် လုပ်ထားသော် လည်းထုံးစံအတိုင်း ငွေ၊ အာဏာ ရှိသူများက နည်းမျိုးစုံဖြင့် အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားစမြဲပင်ဖြစ်သည် ။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍကြီးများစွာ ပါဝင်ခဲ့ပါသည် ။ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူကျ ဆုံးသွားသော အာဇာနည် ဦးရာဇတ် ရှိသည် ။ အလှုဒါန အမြောက် အမြားပေးခဲ့သူပျဉ်းမနား ဟာဂျီဒေါ်ပုဆိုသူလည်းရှိသည် ။ ဒေါက် တာ ကိုကိုကြီး (drkokogyi.wordpress.com) သမိုင်းပြုစာတန်းအရ “မွတ် စလင်” ဟူသည် မှာ “အစ္စလမ်” ဘာသာကိုးကွယ် သူမည် သည့် လူမျိုးမဆိုခေါ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ် က “မဟာမေဒင် ဟုလည်းခေါ်ကြသည် ။ အေဒီ(၆၅၂-၆၆၀) ခန့်က မြန်မာပြည် သို့ အာရပ်ကုန်သည် များ ပုသိမ်ဆိပ်ကမ်းသို့ မကြာခဏလာကြပြီး၊ မြနမာပြည် တွင် အခြေချနေထိုင်သော သူများမှာ (အီရန် )ပါရှား နိုင်ငံသားများဖြစ်သော ဖာရစီလူမျိုးနွယ် မွတ် စလင်များဖြစ်ကြသည် ။ ပုဂံမင်းဆက် ၊ နရပတေ့မင်း (1255-1285) လက် ထက် တွင် တရုတ် စစ်တပ် (တာတာ စစ်တပ်) ၏ အကြီးအမှူးမှာ ဗိုလ် မှူးနဇရွတ် ဒင်း (အစ္စလာအာရပ်အမည် ) ဖြစ်ပါသည် ။ သူတို့ကို
8. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 8/15 မဟာမက် ဘာသာဝင်များ၊ တရုတ် ပန်းသေးများ စသည် ဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည် ။ စနေမင်း (1698) ထံသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၊ မဂို မွတ် စလင် (၃၀၀) ကျော် သည် ရခိုင်ဒေသမှတဆင့် ၀င်ရောက် ခိုလှုံလာကြရာ၊ မြန်မာပြည် တွင်း ၁၂မြို့မှာ နေရာခွဲချထားပေးပါသည် ။ ပုဂံမင်းလက် ထက် မြန်မာမွတ် ဆလင် မြို့တော် ဝန် ဘိုင်ဆပ် ဆိုသူရှိခဲ့သည် ။ သူ့တပည့် ဦးပိန် ဆိုသူက သစ်လုံးတံတားကို ဦးစီးဆောက် လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဦးပိန်တံတား ဟုအမည် တွင်ခဲ့သည် ။ စစ်သူကြီး မဟာ ဗန္ဓုလနှင့်အတူပန်းဝါတိုက် ပွဲ၊ ၀က် ထီးကန်တိုက် ပွဲ ၊ တို့တွင် နယ် ချဲ့တို့ကိုရွပ်ရွပ် ချွံချွံ တိုက် ခိုက် တွန်း လှန်ခဲ့ သည့်  အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြင်းတပ်ဗိုလ် တပ်မှူးနေမျိုးဂုဏ္ဏရတ် မှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည် ။ ၀ါးခယ် မ မောင်မင်းနိုင် ( လွတ် လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းဝင် မြန်မာ မွတ် စလင်များ ) တွင် မြန်မာမွတ် စလင် များစွာကိုမှတ် တမ်းတင်ထားသည် ။ ဘင်္ဂလားမှရောက် လာသော အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကိုဘင်္ဂလားမွတ် ဆလင်ဟု ခေါ်ကြပြီး ထိုသူများက ရိုဟင်ဂျာ ဟုမြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာကိုကြေငြာခဲ့သည် ။ မြန်မာအစိုးရကလဲ နိုင်ငံသားအဖြစ် လက် မခံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ အစိုးရကလဲ လက် မခံသောကြောင့် အငြင်းပွားနေဆဲဖြစ်သည် ။ မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာ ၉/၉/၂၀၁၁ အရ ၂၀၁၀ခုနှစ် မြန်မာပြည် လူဦးရေ ၅၉.၇၆သန်း တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၈၉.၄၆%၊ ခရစ်ယာန် ၄.၉၈%၊ မွတ် ဆလင် ၃.၇၉%၊ ဟိန္ဒူဝ.၅%၊ နတ် နှင့်အခြား ၁.၃၂% ဟုဆိုသည် ။ CIA Factbook 2013 Buddhist 89%, Christian 4% (Baptist 3%, Roman Catholic 1%), Muslim 4%, Animist 1%, other 2%. ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ စာရိတ္တပညာ ယခုခေတ် တွင် အနိုမ့်ဆုံး ရောက် နေသည် မှာ ငြင်းစရာမလိုပါ။ လွတ် မြောက် ဖို့ ကြိုးစားရာရင်း အမျိုးစောင့်ဥပဒေဖြင့် အစ္စလမ်များကိုတိုက် ခိုက် မှုဖြစ်ခဲ့ပါသည် ။ ဗုဒ္ဓဘုန်တော် ကြီးများကပဲ ဦးဆောင်၊ ကာကွယ် ဖြေရှင်းခဲ့ရသည် ။ နောက် ကွယ် မှ ကြိုးကိုင်သူများ ရှိသည် ဟုဆိုသည် ။ တိုးတက် အမြင်ရှိသူများက ထိမ်းသိမ်းထားသော် လည်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အရင်းခံဖြင့် လူငယ် များကို ပညာပေးရန် အထူးလိုအပ်နေပါသည် ။ အကောင်းဆုံး မျိုးစောင့် ဥပဒေမှာ မိမိကိုယ် တိုင် ဗုဒ္ဓဟောသည့် တရားတော် မြတ် အတိုင်း ကျ င့်ကြံနေထိုင်ဖို့ဖြစ်သည် ။ ဗုဒ္ဓတရားတော် ၏ အခြေခံသည် ၊ စာရိတ္တပညာပင်ဖြစ်သည် ။ အကောင်းဆုံးသော မျိုးစောင့်လုပ်ရပ်မှာ မိမိနှင့်နီးစပ်ရာများကိုဗုဒ္ဓ၏ စစ်မှန်သော မေတ္တာကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်သည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်း စိတ် ဝမ်းကွဲမဖြစ်စေရန် သံဃာတော် များက ဦးဆောင်ညီညွန်ပြနိုင်ရပါမည် ။ ငွေနှင့်အာဏာ ပြိုင်ဆိုင်မှုသာသနာဂုဏ် ညှိုးနွမ်းမှုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်မက အခြား ဘာသာများတွင်လည်းမြင်တွေ့နေရပါသည် ။ တိုးတက် အမြင်ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ခရစ်ယာန်များ၏ နေ့ကလေးထိန်း ဆန်းဒေးစကူးပုံစံ ကြိုးစားကြသည် ။ နိုင်ငံခြား မြန်မာဘုန်းတော် ကြီး ကျောင်းများတွင်လည်းအကောင်ထည် ဖေါ်နေကြသည် ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အပတ် စဉ် အစီစဉ်များ လုပ်ကြသည် ။ အထူးသဖြင့် နေ့ကလေးထိန်း၊ တနင်္ဂနွေ ဥပုဒ်စာဖြေ အချိန်ကုန်ခံပြီး သားသမီးများကိုပါဝင်စေသည် ။ မိဘ မအားလပ်ပါကလည်းကလေးကြိုပို့ လုပ်အားပေးများလည်းရှိကြသည် ။ ကလေး ပြုစုရေးလုပ်ငန်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည် ။ ကလေး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှသင်အံ့ လာသော ကဗျာ၊ စာအံချက် များကိုလူကြီးများ ကြားသည် နှင့် စာရိတ္တပျက် ပြားနေမှုများကို
9. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 9/15 ချုပ်တည်းလာနိုင်သည် ။ လူတိုင်း စာရိတ္တကောင်းလိုကြပါသည် ။ အဆိုးရွားဆုံးသူအင်ဂုလိမာလာ လူပေါင်းများစွာ သတ် ဖြတ် ခဲ့သူပင် ဗုဒ္ဓတရားတော် ကြောင့် ရဟန်းန္တာအဖြစ် ရောက် ခဲ့ရသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုမျှဆိုးသောသူရှိခဲ့လျှ င်ပင် အပြစ်ဝဋ်ကြွေး ဒီဘဝမှာပင် ဆပ်နိုင်သည့် ပုံပမာ တစ်ခုဖြစ်သည် ။ အလှုဒါနသည် ဘဝကူးကောင်းရန် အနိုမ့်ဆုံးသော ကုသိုလ် ဖြစ်သည် ။ ဗုဒ္ဓနှင့်စာရိတ္တပညာကိုမိမိ၊ သားသမီး၊ မိသားစုတွင်း သာသနာပြုနိုင်သူများက ပိုပြီး ဘဝကျေ နပ် ခံစားမှုရပါသည် ။ ဗုဒ္ဓရာဇဝင်တွင် ငယ် စဉ် 1970+ မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀ တေဇစာစောင်မှာ ဖတ် ဖူးသည် ထင်ပါသည် ။ အခုအနှစ်၄၀လောက် အကြာမှာ သေချာပြန်ဖတ် ရာ အလွန်အံ့ သြဘွယ် ကောင်းလှပါသည် ။ ထိုကဲ့ သို့ နားလည် လွယ် သော ပညာပေး ပုံပမာများစွာ ရှိခဲ့သော် လည်းနောက် ပိုင်းတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မထုတ် နိုင်၊ မဖြန့်နိုင်ကြပါ။ ယခုအခါ စာပေလွတ် လပ်ခွင့် ရရှိပြီးနောက် ဗုဒ္ဓစာအုပ်စာပေများစွာ ပြန်လည် ထုတ် ဝေနေကြပြီဖြစ်သည် ။ ဆရာကြီး (ပန်းချီ) ဦးဘကြည် ၏ “ဇာတ် တော် ကြီးဆယ် ဘွဲ့” (မဟော် သဓါအပါအဝင်) ရုပ်ပြပန်းချီစာအုပ်၊ အင်္ဂလိပ်မြန်မာစာအုပ်များလဲ ပုံနှိပ်ထုတ် ထားပါသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျ မ်းစာများသည် လေးပင်ပြီး၊ နက် နဲခက် ခဲလှပါသည် ။ သာသနာပြုရန်အတွက် အလွယ် ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ လက် တွေ့ကျ သော တရားထိုင်နည်းပင် ဖြစ်သည် ။ တေမိ- အသက် ကြီးသူများ အာဏာစွန့်ရေး မဟာဇနက - မိခင်ကောင်း၏၊ သားကိုပြုစုပျိုးထောင်မှု သူမဏ္ဍသာမ - မိဘမေတ္တာ နှင့် သမင်သားအလွန်တက် မက် သော (ကာမဂုဏ် ) မင်းကြီးအကျွ တ် တရား နေမိမင်းကြီး - အပြစ်လမ်း နှင့် ကောင်းမှုကုသိုလ် ၊ သကြားမင်းထံ အလည် သွားခြင်း မဟောသဓာ - လောကပညာရှိကြီး၊ ပညာရပ်များ အံ့ မခန်းဖွယ် ရာ..... စသဖြင့် ဇတ် တော် ကြီးဆယ် ဘွဲ့ .. တိုရင်း၊လိုရှင်း ရုပ်ပြဖြင့် ဖေါ်ပြထားချက် ဖြစ်သည် ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာများသည် ထိုင်းနိုင်ငံထံမှအတုယူ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေသည် ။ ၇နှစ်တိုင် သံဃာအဖြစ် သီတင်းသုံးနေသော Mongkut ကို၁၈၅၁တွင် ထိုင်းဘုရင်အဖြစ် နန်းတင်ခဲ့သည် ။ ထိုဘုရင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ခဲ့သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှလာသော မွန်ဘုန်းကြီးများ၏ ကောင်းမြတ် ခြင်းများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်သင့်လျှော် အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ခဲ့သည် ။ နောက် တက် လာသော ရာမမင်း Rama V ကလည်းပြုပြင်ရေး ဆက် လုပ်သည် ။ Mongkut's reform ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ၁၉၇၀တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှဗုဒ္ဓဘုန်းတော် ကြီးများ၏ ၉၅% ထိအောင်မြင်ခဲ့သည် ။ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွင် မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာကဲ့ သို့ သီလရင် လုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံသံဃာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှာ ၁။ သီရိလင်္ကာမှာ စာသင်ကျောင်းတိုက် များအားဖြင့် ဗုဒ္ဓအခြေခံပါဠိစာပေသင်ကြားခြင်း ၂။ ဟိန္ဒူကျ င့်ထုံးများ၊ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားတွင်ကျ င့်သုံးမှုများကိုရပ်ဆိုင်းစေခြင်း ၃။ နတ် ကိုးကွယ် ခြင်းဓလေ့ များကိုဖယ် ရှားခြင်း၊ တရုပ်ပြည် မှမဟာယာနကျ င့်စဉ်များကိုဖယ် ရှားခြင်း ..စသည် တို့ဖြစ်သည် ။ မြန်မာပြည် တွင် ဦးနုလက် ထက် ၊ သင်္ဂယနာတင်ခဲ့သော် လည်း၊ အုန်းဌက် ပျောပွဲ၊ ဗေဒင်၊ ယတြာ ..စသည် တို့ ဘုန်းကြီးများတွင် ရောထွေးလျှ က် ရှိသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာများသာမက၊ ဖရီးသင့်ကားမြန်မာများ၊ အခြားဘာသာဝင် မြန်မာများ၊ မြန်မာကလေးသူငယ် ၊ လူငယ် များ လွယ် ကူစွာ၊ ဖတ် ရှုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့ လှုဒန်း၊ ဝေငှပေးမည့် စေတနာရှင် အမျိုးသာသနာ ချစ်သူများစွာ ပေါ်ပေါက် ပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဘုန်ကြီးကျောင်းများမှစာရိတ္တပညာအဖြစ်၊ သင်ကြားကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက် ပါသည် ။ If you can't feedahundred people, then feed just one. .. Mother Teresa
10. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 10/15 မည် သို့ပင်ဖြစ်စေ လူငယ် လူရွယ် များသည် စာရိတ္တမှန်ကန်စွာ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးသာမက၊ မြို့ပြ၊ စက် မှုဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်းထိရောက် စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူများဖြစ်သည် ။ စာရိတ္တပညာကိုအစိုးရ စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှသာ ထိရောက် စွာ သင်ကြားနိုင်ပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအရာရှိကြီးများကိုသူတို့သားသမီးများက စာရိတ္တစံနမူနာ ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လိုပါသည် ။ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှ၊ စာရိတ္တပညာကိုမှန်ကန်စွာကျ င့်သုံးနိုင်ခြင်းမည် ။ သို့မှသာ မြန်မာလူမျိုးများ ကြုံနေရသော ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုအောင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်သည် ဟုတင်ပြလိုပါသည် ။ အတိုက် အခံကိုမကြိုက် နှစ်သက် ခြင်း ဗုဒ္ဓ၊ ယေရှု၊ မိုဟာမက် တို့သည် ဘာသာရေးကျ င့်စဉ်များကိုမသတ် မှတ် ခဲ့ပါ။ သူတို့နောက် လိုက် များ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ကျ င့်ဝတ် များစွာကိုသတ် မှတ် ခဲ့ကြသည် ။ ထိုကျ င့်ဝတ် များကိုတော် လှန်လိုသူများက အတိုက် အခံအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာသည် ။ ထုံးစံအတိုင်း အတိုက် အခံများသည် နှိပ်ကွပ်၊ တိုက် ခိုက် ခံရသည် ။ အတိုက် အခံများကိုမိစ္ဆာဝါဒီဟုသတ် မှတ် ပြီး၊ အခြားဘာသာများထက် ပင် ကြောက် စရာကောင်းသည် ဟုဆိုကြသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ထေရဝါဒနှင့်မဟာယာန (Theravada & Mahayana) ၊ ခရစ်ယာန်တွင် ရိုမင်ကာသိုလစ်နှင့်ပရိုတက် စတင် (Catholic & Protestant) ၊ မွတ် ဆလင်တွင် ဆွန်နီနှင့်ရှိယိုက် (Sunni & Shia) တို့ဖြစ်ကြသည် ။ အမုန်းတရားများ၊ အညှိုးတရားများဖြင့် မူလဘာသာကိုဖျက် ဆီးသူမိစ္ဆာများအဖြစ် အတူပူးပေါင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ နိုင်ငံရေးတွင်လည်းအာဏာရပါတီသည် အတိုက် အခံနှင့် ပူးပေါင်းလေ့ မရှိပါ။ နှိပ်ကွပ်လေ့ သာ ရှိသည် ။ သို့သော် နိုင်ငံအကြပ်အတည်းတွေ့ချိန်တွင် ပြင်ပရန်ကိုပူးပေါင်းကာကွယ် လေ့ ရှိသည် ။ လူ့သဘောသဘာဝ ဖြစ်ပါသည် ။ ဘာသာမဲ့များ (ကွန်မြူနစ်၊ ဖရီးသင့်ကား) လူငယ် များ အထူးသဖြင့် ပညာတတ် လာချိန်တွင် ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျ င်လာကြသည် ။ ဆန့်ကျ င်မှုအကြီးမားဆုံးမှာ ကွန်မြူနစ်ကြီးစိုးသော ကာလဖြစ်သည် ။ အလွန်အင်အားကြီးသော ဘုရားမဲ့ဝါဒီ၊ သာယာဝပြောသော လူ့ဘောင်ကိုတည် ဆောက် ရန် ငွေရှင်၊ အရင်းရှင်များကိုတော် လှန်ရေးဖြစ်သည် ။ ၁၉၈၉တွင် ကမ္ဘာ့ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကြီးများဖြစ်သည် ရုရှား၊ တရုပ်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်သွားခဲ့ရသည် ။ သို့သော် ဘာသာမဲ့ ကွန်မြူနစ်များစွာ ရှိနေပါသည် ။ ဥရောပ၊ အမေရိကတွင်လည်းဘုရားမဲ့ Free Thinker, Atheist စသည် တို့လဲ ရှိနေပါသည် ။ သူတို့သည် Freedom လွတ် လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ငွေရှင်၊ အရင်းရှင်များကိုတော် လှန်နေဆဲဖြစ်သည် ။ ခေတ် ပညာတတ် များစွာ ပါဝင်သည် ကြီးမားသော အုပ်စုကြီးဖြစ်သည် ။
11. 3/13/2014 အစ္စလမ့်ကျင်ေ◌ရးများ ◌မြာန◌ိင http://mingalaronline.biz/stories/islam.expending.2014.htm 11/15 ကျွ န်ုပ်တို့၏ဘဝအသက် တာ (ပုံသဓကများ) လူတိုင်း မိမိအမျိုးဂုဏ် ကိုထိန်းသိမ်းကြပါသည် ။ တတ် သိပညာရှင်မျိုးရိုး၊ ဘုန်းကြီးမျိုးရိုး၊ သူဌေးမျိုးရိုး စသဖြင့် လူ့မှာအမျိုး၊ ကြက် မှာအရိုး စကားပုံအတိုင်း ဖြစ်လာလေ့ ရှိသည် ။ သို့သော် ရှေးကုသိုလ် ကံကောင်းသူများ (ဘုရားကောင်းကြီးရသူများ) အဖို့ အံ့ သြဖွယ် အဖြစ်အပျက် များကိုဖန်တီးနိုင်ပါသည် ။ မြန်မာ့ ရာဇဝင်ကိုကြည့် လျှ င့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူထုကြည် ညိုလေးစားခြင်းသည် ၊ သူ့ဖခင် ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်း အရှိန်အဝါ ပါမည် ဖြစ်သည် ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ လွှတ် တော် ဥက္ကဌဦးရွှေမန်း၊ ယခင်စစ်ဗိုလ် ချုပ်ခေါင်းဆောင်များသည် ဘယ် ပုံဘယ် နည်း၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှန်းလဲမသိ။ သူတို့သည် တိုင်းပြည် နှင့်လူထုကိုတကယ် အကျိုးပြုခြင်း ရှိမရှိကိုနောင်လာနောင်သားများက ဆုံးဖြတ် ရပေမည် ။ အချို့သည် ခဏနှင့်ပင် ထီးနန်းနှင့်မထိုက် တန်ကြောင်း မြန်မာ့ ရာဇဝင်ရှိမောင်းကားစားမောင်မောင် ၆ရက် နန်းစံခြင်း ပုံသာဓကများ ရှိသည် ။ ထို့ကြောင့် အသက် ရှင်နေစဉ်တွင် မိမိ၏ ပုံသာဓက၊ အပြုအမူ၊ လုပ်ရပ်များသည် မိမိသမိုင်းကိုရေးနေခြင်းဖြစ်သည် ။ အထူးသဖြင့် စာရိတ္တပိုင်းတွင်၊ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူ၏ အကျ င့်တရားများသည် ပြောသည့် အတိုင်း၊ လုပ်ပြနိုင်ပါက ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်သည် ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် Action speaks louder than Word .. မြန်မာလိုပြန်ရလျှ င် အပြောထက် အလုပ်နဲ့သက် သေပြခြင်း ဟုဆိုရပါမည် ။ လူဆိုသည် မှာ မွေးကတည်းက စရိုက် ကြမ်းပါသည် ။ အတ္တကြီးပါသည် ။ တိုက် ခိုက် ၊အင်အားသုံးလေ့ ရှိသည် ။ သို့သော် လူသည် တိရိစ္ဆာန်မဟုတ် သောကြောင့် လူ့ယဉ်ကျေးမှုကြီး ပေါ်ပေါက် လာရသည် ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုတွင် စာရိတ္တနှင့်ပတ် သက် သော ယုံကြည် ချက် Faith သည် အလွန်အရေးပါသဖြင့် နတ် နှင့် နတ် ဘုရားကိုးကွယ် ၊ ပသခြင်းများမှပိုပြီးယဉ်ကျေးသော ဘာသာကြီးများ ပေါ်ပေါက် လာရသည် ။ ထိုဘာသာကြီးများ၏ ယုံကြည် ချက် များ၊ ကျ င့်ဝတ် များကိုစံနမူနာပြ လူပုဂ္ဂိုလ် များက စတင်ခဲ့သည် ။ ဘာသာကြီး၎ခုကိုကြည့် ပါက ခရစ်ယာန် (ယေရှု)၊ မွတ် ဆလင် (မိုဟာမက် )၊ ဗုဒ္ဓ(ဂေါတမ)၊ ဟိန္ဒူ( xxx) တို့ဖြစ်သည် ။ ဟိန္ဒူဘာသာသည် ဂျူးဘာသာ (မိုးဇက် ) ကဲ့ သို့ နှစ်၅၀၀၀မျှ ရှေးကျ သဖြင့် ချန်လှပ်ခဲ့ပါမည် ။ ၁။ ဂေါတမမြတ် စွာဘုရား သူသည် ဘုရင့်သားတော် အဖြစ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၅၀၀ခန့် (~BC 500) က နန်းတော် တွင် ဘုရင့်သားတော် အဖြစ် ယခု နိပေါနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့သည် ။ မေလ၊ လပြည့် နေ့ကိုVesak Day ဗီးဆပ်၊ ဗုဒ္ဓမွေးနေ့ ကျ င်းပကြသည် ။ ဘုရင်အဖြစ် စိုးစံကာ၊ လောကစည်းစိမ်များကိုခံစားခဲ့သည် ။ ၁၆နှစ်တွင် လက် ထပ်ပြီး၊ မိဘုရား၊ သာတော် ၊ အဆောင်ယောင်များနှင့်အိမ်ရှေ့မင်းစည်းစိမ်မှအို၊ နာ၊သေခြင်းများကိုမြင်ပြီနောက် ၊ သက် တော် ၂၉နှစ်တွင် တောထွက် တော် မူသည် ။ ၆နှစ်အကြာ သဗ္ဗညုတဥာဏ် တော် ရရှိပြီး၊ နိဗ္ဗာန်ရောက် ကြောင်း တရားကိုလှည့် လည် ဟောကြားက သက် တာ် ၈၀ တွင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့သည် ။ ဗုဒ္ဓတရားများကိုတပည့် တော် ရဟန်းသံဃာများက ပဋိကတ် ကျ မ်းအဖြစ် မှတ် တမ်းတင်ခဲ့သည် ။ ဗုဒ္ဓမိခင်၊ မိဖုရား၊ ညီတော် တို့သည် ပါရမီဖြည့် သူများ ဖြစ်လာကြသည် ။ ဗုဒ္ဓတွင် မိဖုရားတစ်ဦးသာ ရှိပြီး၊ သားတစ်ဦး၏ ဖခင် အိမ်ထောင်ရှင်ဘဝ ဖြစ်ခဲ့သည် ။ လူလောကတွင် ၈၀နှစ် နေထိုင်သွားသည် ။ ဂေါတမ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသည့် နောက် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဟိန္ဒူအများစုဖြစ်သော အိန္နိယနို င်ငံသို့ ပြန့်ပွားသွားပြီး၊ အသောကမင်းကြီးလက် ထက် တွင် အိန္နိယနိုင်ငံတော် ဘာသာအဖြစ် လူအများစုကိုးကွယ် လာကြသည် ။ ၂။ ယေရှု သူသည် သာမန်မိသားစုလေးမှ၊နေရာပင်မရှိပဲ နွားတင်းကုပ်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ခန့်က (~AD 30) ယခုအစ္စရေးနိုင်ငံ၊ ဗက် လင်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည် ။ သာမန်လူအဖြစ် ကြီးပြင်းခဲ့သည် ။ ဒီဇင်ဘာ(၂၅)ရက် ကိုယေရှုမွေးနေ့ ခရစ်စမတ် အဖြစ် ကျ င်းပကြသည် ။ အသက် (၃၀) အရွယ် ထိအောင် အစ္စရေး (ဂျူးလူမျိုး) ဓလေ့ ထုံးစံအတိုင်း မိရိုးဖလာ ဖခင်၏၊ လက် သမားအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၃၀နှစ်မှ၃၃နှစ်အတွင် ဘုရားဇာတိစတင်ပြသသည် ။ အလွန်အံ့ သြဘွယ် တရားများကိုဟောကြားပြီး၊ အံ့ သြဘွယ် လုပ်ရပ်များ ၃နှစ်တာကလတွင် လုပ်ဆောင်ပြသခဲ့သည် ။ ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက အတိုက် အခံ၊ မိစ္ဆာပရောဖက် အဖြစ် သတ် မှတ် ပြီး၊ ကားစင်တင်သတ် ခဲ့သည် ။ ထိုသို့ ရက် စက် စွာ အသေသတ် ခံခြင်းမှာ ကျ မ်းစာကိုပြည့် စုံစေခြင်းဖြစ်သည် ။ သူ့တပည့် တော် များက သူ၏ပြောဆို၊ လုပ်ဆောင်ချက် များကိုရေးသားမှတ် တမ်းတင်ကာ ဓမ္မသစ်ခရစ်ယာန်ကျ မ်းဖြစ်လာခဲ့သည် ။ ယေရှုသည် မိန်မ၊ မိသားစုမရှိ။ လူလောကတွင် ၃၃နှစ်သာ နေထိုင်သွားသည် ။ နောက် လိုက် များက ယေရှုတရားတော် အတိုင်း နှိမ့်ချစွာနေထိုင်၊